မျိုးမြင့်ချို: April 2012
ပြည်တွင်းဖြစ် ပြည်တွင်းစစ် (မိုးဝေး)
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေဒေးနေ့အတွက်ထုတ်ပြန်သော မြို့ပြလိင်လ...
စစ်မြေပြင်မှပုံရိပ်များ (အပိုင်း၆၀) မျိုးမြင့်ချို...
ကဗျာနွေဦးတော်လှန်ရေး ခေတ်ပြိုင်ကဗျာနိဒါန်း (လွန်းဆ...
ကျနော် ရေဒီယိုသတင်းထောက် (ဒုတိယပိုင်း) (ကိုညို)
ကျနော် ရေဒီယိုသတင်းထောက် (ပထမပိုင်း) (ကိုညို)
“လေးစားလိုက်နာ”လို့ပြင်မပေးရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ (တူေ...
စစ်မြေပြင်မှပုံရိပ်များ (အပိုင်း ၅၉) (မျိုးမြင့်ချ...
Happy New Year နှင့် နှစ်သစ်ကူးမှာပျော်ပါစေ (မျိုး...
လူသာကင်းရဲ့အိပ်မက်မြို့၊ မစ္စစ္စပီနဲ့ Civil Rights M...
စစ်မြေပြင်မှပုံရိပ်များ (အပိုင်း ၅၇) မျိုးမြင့်ချိ...
ကြွက်၊ မြွေနှင့်ဧရာဝတီကိစ္စ (မျိုးမြင့်ချို)
at 11:21 PM Posted by myo0comments
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးလို့ဆိုလိုက်ရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့အကြောင်း၊ ဗမာ့တပ်မတော်အကြောင်း၊ တိုက်ပွဲများအကြောင်း အစရှိသည့်တို့ကိုသာ ရေးသားခဲ့ကြ၊ ပြောဆိုခဲ့ကြပါ တယ်။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဖက်ဆစ်တို့ကိုတော်လှန်လိုစိတ်ရှိလာအောင်၊ ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့ အတွင်းသရုပ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို ပြည်သူလူထုနားလည်လာအောင်၊ တော်လှန်ရေးသဘောတရားကို သိရှိ လာအောင်ဟောပြောပို့ချမှု၊ စနစ်တကျစည်းရုံးတတ်မှု၊ တော်လှန်တတ်မှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးသားဖော်ပြမှုဟာ အင်မတန်နည်းပါးနေပါတယ်။ တကယ်တော့ စစ်ရေးဆိုတာ နိုင်ငံရေးလက်အောက်ခံပါပဲ။ စစ်ရေးကိုဦးဆောင်သွားတာ နိုင်ငံရေးပါပဲ။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပြည်သူလူထုကို ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး သဘောတရားတွေးကို နားလည်လာအောင်၊ စနစ်တကျတော်လှန်တတ်လာအောင် နိုင်ငံရေးနည်းအရ စည်းရုံးပို့ချလမ်းညွန်ပြခဲ့တဲ့ သခင်ဗဟိန်းရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သခင်ဗဟိန်းကို စစ်ကိုင်းခရိုင် အင်းဝမြို့မှာ မြန်မာသက္ကရာဇစ် ၁၂၇၉ ခုနှစ် ဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင် အဘ ပွဲစားကြီးဦးမှင်၊ အမိပွဲကတော် ဒေါ်ဒေါ်ဦးတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်အခါက အင်းဝမြို့ မူလ တန်းကျောင်းမှ လေးတန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းကနေ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဆယ်တန်းစားမေးပွဲကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာစာ၊ ရာဇဝင်ဘာသာရပ်များနဲ့ ဂုဏ်ထူးဆွတ်ခူး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက ကျောင်းသားများရဲ့ချစ်ကြည်လေးစားမှုကိုခံရပြီး ပေါ်ပေါက်လာ သမျှ ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံများမှာ ရှေ့တန်းကနေ မားမားမတ်မတ်ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် မန္တလေးမြို့ စိုက်ပျိုးရေး ကောလိပ်သိပ္ပံကျောင်းကို ပြောင်းရွှေ့ပြီးပညာသင် ကြားခဲ့တယ်။ အိုင်အေစာမေးပွဲမှာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးပထမရပြီး ပါဠိဘာသာ ဂုဏ်ထူးဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ အိုင်အေအထက်တန်းပညာများကို သင်ကြားနေစဉ် မန္တလေးမြို့စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈ ခုနှစ်မှာ ကိုဗဟိန်းတယောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘီအေအောက်တန်းပညာကိုသင်ကြားနေစဉ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ခံခဲ့ရခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃ဝဝ ပြည့်နှစ်မှာ အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ရေနံမြေမှာလူတန်းစားတိုက်ပွဲအသွင် ကူးပြောင်းပြီး ရေနံမြေအလုပ်သမားသပိတ်ကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ကိုချီတက် အရေးဆိုအောင်ပွဲခံနိုင်ရေးအတွက် ကိုဗဟိန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေက ဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အတွက်???ကိုဗဟိန်းကို မကွေးမြို့ရေနံမြေအလုပ်သမားသပိတ်တပ်သားများကို တရားဟောနေစဉ် “မြင်းခွာ တချက်ပေါက်ရင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမယ်” လို့ ရဲရဲတောက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗဟိန်း ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ ၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက်လာပြီး သပိတ်မီးဟာ တနိုင်ငံလုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်သွားတဲ့အထိ ပြန့်ပွားသွားခဲ့ရပါတယ်။
၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံကြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂ ညီလာခံကြီး တခုကို ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ ညီလာခံကြီးက ကိုဗဟိန်းကို ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ရွေးကောင်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တို့ကြောင့် ဘီအေအထက်တန်းစာမေးပွဲကို မဖြေဆိုနိုင်တော့ဘဲ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး သခင်အမည်ကိုခံယူကာ သခင်ဗဟိန်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ မြေအောက် တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းများကို ခေါင်းဆောင်ပြီး ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံစာတမ်း၊ မီးပွားစာစောင်၊ ဗမာ့တော်လှန် မှုစာတမ်းများကို လျှို့ဝှက်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တယ်။
များမကြာမီနယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီး မန္တလေးထောင် ပွင့်သွားတော့မှ သခင်ဗဟိန်းလည်း လွတ် မြောက်လာခဲ့ရတယ်။ ထောင်မှလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ သခင်ဟိန်းဟာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်ဗဟိန်းဟာ တဖက်ကလည်း ဂျပန်ခေတ် ဗမာအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီး သခင်နုရဲ့လက်အောက်မှာ ဒုတိယအတွင်းဝန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဂျပန် ခေတ်ကာလတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဂွတ္တလစ်ရပ်ကွက်ရှိ ဒို့ဗမာဆင်းရဲသားအစည်းအရုံး ဋ္ဌာနချုပ်ရုံးသည် ဖက်ဆစ် စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာဌာနတခုပါပဲ။ တို့ဗမာဆင်းရဲသား အစည်းအရုံးဆိုတာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ သခင်မြ ခေါင်းဆောင်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ သခင်ထွန်း အုပ်၊ သခင်ဗစိန် ခေါင်းဆောင်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံးနှင့် ဒေါက်တာဘမော် ခေါင်းဆောင်သော ဆင်းရဲ သားဝံသာနုအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ပါပဲ။ ဂျပန်ခေတ်၏တခုတည်းသော တရားဝင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းဆိုရင် မမှားပါဘူး။
ဒို့ဗမာဆင်းရဲသားအစည်းအရုံးဌာနချုပ်သို့ သခင်ဗဟိန်းသည် မကြာခဏလာလေ့ရှိပြီး ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တယ်။ သခင်မြအိမ်မှအပြန် တညတွင် ဒို့ဗမာဆင်းရဲသား အစည်းအရုံးဌာနချုပ်သို့ ရောက်လာခဲ့ပြီး ဖက်ဆစ်တို့၏ဒဏ်ကို လူတွေမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြကြောင်း၊ အရှေ့ ရိုးမရှိ ကရင်လူထုမှာ ဖက်ဆစ်တို့၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို အလူးအလိမ့်ခံနေရကြောင်း၊ တပ်မတော်တွင်း၌ လည်း တိုင်းအသီးသီးတွင် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များ၊ တော်လှန်လိုသောစိတ်ဓာတ်များ ပေါက်ကွဲ လုဆဲဆဲ ဖြစ်နေကြကြောင်း လူကြီးတွေကလည်း အဲဒီအခြေအနေကိုသိရှိခဲ့ကြပြီး အချင်းချင်းညှိနှိုင်းလို့ရတန် သလောက်ရခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တောင်ငူနယ်က အခြေအနေကိုသိချင်ကြောင်း လာရောက်မေးမြန်းခဲ့ပြီး တောင်ငူဘက်ကို ဆင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။
တောင်ငူဘက်သို့ မဆင်းမီ သခင်ဗဟိန်းဟာ သူ့ရဲ့ဇနီးသည်မခင်ကြီးနဲ့ သခင်ဗသိန်းတင်တို့ကို ခေါ်ယူပြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် အင်ဂလုံးရွာကလေးသို့ သွားရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီရွာကလေးမှာ သခင်စိုးနဲ့ အခြား ရဲဘော်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရက်ပေါင်း ၂ဝ ကျော် သဘောတရားရေးရာသင်တန်း တက်ခဲ့ကြတယ်။ ရန်ကုန် ပြန်ရောက်ပြီး ၁၅ ရက်ခန့်အကြာ သူနေထိုင်သော သခင်နုနေအိမ်မှ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် တောင်ငူနယ်ဘက်ကို ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ပဲခူးမြို့ စံပြတပ်ရင်းမှာ ၁၉၄၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ကနေ ၇ ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးက ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေးပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး နီးကပ်လာချိန်မှာ ဖက်ဆစ်တို့ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် တော်လှန်ရေးစစ်တိုင်းများကိုသတ်မှတ်ပြီး တိုင်းအလိုက် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အခါ တိုင်း (၁) ပြည်၊ သာယာဝတီ၊ ဟင်္သာတ အရှေ့အတွက် စစ်ရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးအဖြစ် သခင်ဗဟိန်းကို ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။
သခင်ဗဟိန်းတို့လင်မယား ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် တောင်ငူဘက်သို့ လျှို့ဝှက်ဆင်းလာခဲ့အချိန်က ၁၉၄၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ဗဟိန်းတို့လင်မယားဟာ ကိုထွန်းလှိုင်၊ မသန်းမြင့် အမည်နှင့် ကိုရောင်ဖျောက်နေခဲ့ကြတယ်။ မော်လမြိုင်မှရောက်လာသော ကုန်သည်လင်မယားအသွင်နှင့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် တောင်ငူနယ်တဝိုက်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဖက်ဆစ်တို့၏ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ မျက်စိကန်း၊ နားကန်းဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေကို မျက်စိပွင့်၊ နားပွင့် ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထွက်ရပ်လမ်းကို ရစေခဲ့တယ်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် အတွေးအခေါ်မြော်မြင်ရေး သဘောတရားသစ်၊ တရားမှန်များကိုအခြေခံပြီး စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် သင်တန်းများကို မရပ်မနားပို့ချခဲ့တယ်။ သင်တန်းများမှာ သခင်ဗဟိန်း ပို့ချခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကတော့…
- လွပ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း ၁ နှင့် ၂
- တော်လှန်ရန် စိုင်းပြင်ကြစို့
- စစ်၏ နည်းသစ်များ
- လျှို့ဝှက်ရေးကို မည်သို့ကျင့်သုံးမည်နည်း
သခင်ဗဟိန်းဟာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူ့မှာ စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိလို့ စစ်ရေးကိုခေါင်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက်များက လုံးဝမထင်ခဲ့ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ သခင်ဗဟိန်းပို့ချတဲ့ “စစ်၏နည်းသစ်များ” သဘောတရားဟာ အရင်းရှင်စစ်ရေးနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေတဲ့ ပြည်သူ့စစ်အခြေခံသဘောတရားများ၊ ပြောက်ကျား စစ်ဆင်ရေးနည်းများ ဖြစ်ကြတယ်။ အရင်တုန်းက မကြားဘူး၊ မသိဘူးကြတဲ့ စစ်ရဲ့သဘောတရားသစ်များ၊ နည်းပညာသစ်များ ဖြစ်ကြတယ်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့စစ်ပွဲရဲ့အောင်ပွဲရလဒ်များဟာ သခင်ဗဟိန်းပို့ချခဲ့တဲ့ “စစ်၏နည်းသစ်များ” ရဲ့အကျိုးဆက်များပဲ ဖြစ်ကြတယ်။ သခင်ဗဟိန်းရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံဟာ မင်းသား ဟန် နုနုနယ်နယ်ပင် ဖြစ်တယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ သခင်ဗဟိန်းဟာ မင်းသားမဟုတ်တော့ဘဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့စစ်ရေးကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တယောက် ဖြစ်ခဲ့ တယ်။ အဲဒီအချက်ကို တောင်ငူခရိုင် ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲများက သက်သေပြခဲ့တယ်။ သခင်ဗဟိန်းရဲ့ နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတခုကတော့ သူကိုတိုင်ပြုစုရေးသားပြီး သင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့ “ကရင်-ဗမာ သွေးစည်း ရေး” စာတမ်းပါပဲ။ ဒီစာတမ်းကတော့ သမိုင်းဝင်စာတမ်းတစောင်ပဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီစာတမ်းကြောင့် အရှေ့ရိုးမ မှာ ကရင်-ဗမာညီညွတ်ရေးသာမက လူမျိုးစုံညီညွတ်ရေး အင်အားကောင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအချက်ကို အရှေ့ရိုးမ မှာရှိတဲ့ ကရင်လူမျိုးအကြီးအကဲများ၊ လူထုများက ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ ပဲခူးရိုးမမှာ ကရင်-ဗမာချစ်ကြည်ရေးဟာ သခင်ဗဟိန်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ခိုင်မြဲခဲ့တယ်။ သခင်ဗဟိန်းရဲ့ချစ်ကြည်ရေး ခေါင်း ဆောင်မှု သဘောတရားကိုကြားရရုံနဲ့ ကရင်လူထုက သခင်ဗဟိန်းကိုလေးစားခဲ့ကြတယ်။ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ တဲ့အခါ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတယ်။ အချို့က ထူးထူးကဲကဲကို ချစ်ခင်ခဲ့ကြတယ်။
သခင်ဗဟိန်းဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကို တော်လှန်ရေး သဘောတရားများသင်ကြားပေးခဲ့ တယ်။ အဲဒီ သဘောတရားဟာ လူထုကိုချုပ်ကိုင်မိတာနဲ့အမျှ တော်လှန်တဲ့အင်အားစုကြီးတရပ် ဖြစ်ပေါ်လာ ခဲ့ရတယ်။ အထက်ပါသဘောတရားကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့သခင်ဗဟိန်းအနေနဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး သဘောတရားများကို တောင်ငူခရိုင်တခုလုံး နေရာအနှံ့အပြားမရပ်မနားပို့ချခဲ့တယ်။ စိုက်ပျိုးရေး ညောင်ပင် သာရွာ၊ စစ်တောင်းကမ်းပါးရှိ မွေတွင်းရွာ၊ ပဲခူးရိုးမ ကျီးမနိုးချောင်းဖျားစခန်း၊ ဆင်ပချပ်ရွာ၊ ပဲခူးရိုးမ ကျီးမနိုး ချောင်းဖျားစခန်း၊ ဆင်ပချပ်ရွာ၊ ကြူအင်းရွာ၊ စစ် တောင်းကမ်းပါးရှိ သရက်တောရွာ၊ ဘွားအေစုရွာ၊ ဘုမ္မတီး တောင်ခြေရှိ မြောက်ငိုကုန်းရွာ အစရှိတဲ့ရွာများဟာ သခင်ဗဟိန်း သဘောတရားပို့ချရာနေရာများ ဖြစ်ခဲ့ကြ တယ်။ သခင်ဗဟိန်းစခန်းမှာ ဆင်ပချပ်ရွားအနီး တောင်ခြေတွင်ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာဟာ ပြောက်ကျားတပ် များရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာကစပြီး ဖက်ဆစ်များကို အလစ်ဝင်စီးဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာ ကနေပြီး ဖက်ဆစ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းဖြစ်တဲ့ ကားလမ်းများ၊ မီးရထားလမ်းများကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာကနေပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းများကို ညွန်ကြားခဲ့တယ်။
၁၉၄၅ ခုနစ် မတ်လ ၆ ရက်နေ့ညမှာ ဗိုလ်မှူးဗထူးဟာ ဖြူးမြို့နယ် ကြူအင်းရွာမှာ သခင်ဗဟိန်းနဲ့လျှို့ဝှက် တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲမည့်ဆဲဆဲမှာ ဗိုလ်မှူးဗထူးဟာ သခင်ဗဟိန်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တော်လှန်ရေးကိစ္စများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ အထက်ဗမာပြည် တိုင်း မှူးတဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးဗထူးအနေနဲ့ သခင်ဗဟိန်းကို ဤမျှအထိတန်ဖိုးထားလေးစားပြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံပြီး ၂ ရက်အကြာ မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ဗိုလ်မှူးဗထူးခေါင်းဆောင်တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ကို စတင်??? တော်လှန်ရေးစာစောင်တွေဟာ အဆက်မပြတ်ထွက် ခဲ့ကြတယ်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းများကို ရေးခဲ့တယ်။ ကရင်-ဗမာ သွေးစည်းရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ရေးသားခဲ့တယ်။ အဲဒီစာတမ်းဟာ ဗမာလူမျိုးများအပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ ကရင်လူမျိုးများရဲ့သံသယ ကို ရှင်းစေခဲ့တယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သခင်သိန်းဖေ (သိန်းဖေမြင့်) လေထီးနဲ့ချပေးတဲ့ စာအုပ်များအနက် “ပြင် သစ်ပြည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ” ကို ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်။ စာအုပ်ဘာသာပြန်ပုံမှာ သူက အင်္ဂလိပ်စာအုပ် ကိုကြည့်ပြီး ဗမာလိုတောက်လျှောက်ဖတ်သွားခဲ့တယ်။ မောင်မြင့်ဆိုတဲ့ရဲဘော်က လက်ရေးတိုနဲ့ရေးခဲ့တယ်။ ဖယောင်းစက္ကူပေါ်မှာ စာရှည်ပြန်ရေးပြီး စာကူးစက်နဲ့လှည့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ဗမာပြန်စာအုပ်များ ဖြစ်လာခဲ့ ကြတယ်။ လီနင်ရေး “အစိုးရနှင့်တော်လှန်ရေး” စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး သဘောတရားရေးအခြေခံရှိသော ရဲဘော်များကို သင်တန်းပေးခဲ့တယ်။
သခင်ဗဟိန်းဟာ အလုပ်များကိုမရပ်မနားလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ စစ်ရေးစစ်ရာများးကို အချိန်တိုင်းစီမံနေခြင်း၊ စာတမ်းများကို အဆက်မပြတ်ရေးနေခြင်း၊ နိုင်ငံရေးမှာ သခင်သန်းထွန်းနဲ့ အဆက်မပြတ်အမြဲတိုင်ပင် နေခြင်း၊ တော်လှန်ရေးကိစ္စအရပ်ရပ်ကို အခြားနေရာဒေသမှာရှိတဲ့ရဲဘော်များနဲ့ အဆက်မပြတ် ဆက်သွယ် နေခြင်း စတဲ့တခုပြီးတခုထပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကြားမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်တွေဟာ သူ့ကိုယ်သူ ခံနိုင် ရည်ရှိသည်ထက် အဆပေါင်းများစွာဖိစီးခဲ့တယ်။ အစားအသောက်မကောင်း၊ အားရှိသော ကောင်းမွန်သော အစားအစာများကိုလည်း မစားရ၊ အအိပ်အနေလည်း မမှန်ခဲ့ဘူး။ မိုးရွာတဲ့အခါမှာ နေထိုင်တဲ့ တဲအိမ်က မလုံတဲ့အတွက် ထထိုင်နေရပေါင်းများနေခဲ့တယ်။ သခင်ဗဟိန်းရဲ့အသားမှာ ဝါထိန်နေခဲ့တယ်။ သူ့ဘေးနား မှာ သူ့ချစ်ဇနီးမရှိ။ ကာဘိုင်သေနတ်တလက်သာ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီ ကာဘိုင်သေနတ်ဟာ သူ့အဖော်ဖြစ်နေ တယ်။
တော်လှန်ရေးသဘောတရားဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် “အား” တခုဆိုတာကို ယုံကြည်တဲ့ သခင်ဗဟိန်းဟာ “ဂျူးရင်းအားချေပချက်” “လုဒွစ်ဖြူးဝါးဘက်” အစရှိသောကျမ်းများကို ထန်းတပင်မြို့နယ် သရက်တန်း၊ ဂွအိုင် အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ ယာတဲများမှာ ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကျမ်းများကို အခြေပြုရင်း ပြည်သူ့စစ်သဘောတရားကို သခင်ဗဟိန်းက အသက်ပါပါထူထောင်ပေးခဲ့တယ်။ မြန်မာ့ရေမြေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပြောက်ကျားစစ်၏နည်းသစ်များကိုလည်း ပြုစုခဲ့တယ်။
(၁) အင်အားကြီးသောရန်သူကို ချေမှုန်းရာတွင် ပြည်သူ့ပြောက်ကျားမပါလျှင် မပြီးနိုင်ချေ
(၂) ပြောက်ကျားစစ်သည် လူထုများ၏စစ်ဖြစ်သည်။
(၃) ပြည်သူ့ပြောက်ကျား၏စစ်ကို ဆင်နွှဲနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျေးလက်ကိုအခြေခံရန်လိုသည်။
(၄) တိတိကျကျအားဖြင့် လယ်သမားထုနှင့်လူမျိုးစုများကိုအခြေခံ၍ ဖော်ထုတ်ရန်လိုသည်။
(၅) ပြောက်ကျားစစ်တွဲဖက်မှုမရှိဘဲ ဗမာ့တပ်မတော်က အောင်ပွဲမဆင်နိုင်။
(၆) ပြည်သူလူထုကို စစ်အမြင်အရ စည်းရုံးလေ့ကျင့်တိုက်ပွဲသွင်းရမည်။
(၇) ပြည်သူကို လက်နက်တပ်ဆင်ရဲရမည်။ (ရန်သူ့လက်နက် ဒို့လက်နက်၊ တိုက်ရဲသူ လက်နက်ကိုင်စေရမည်။)
(၈) တိုက်ပွဲအတွင်း တပ်ကိုစည်းရုံးဖွဲ့စည်း။ (တပ်ခွဲစည်းရုံးနိုင်သူ ခွဲမှူး ဖြစ်သည်။)
(၉) ပြည်သူလူထု၏စွမ်းရည်ကို ချွန်းဖွင့်ပေးရမည်။
(၁၀) ဂျပန်ဖက်ဆစ်ချေမှုန်းရေး ပြောက်ကျားစစ်ပွဲကို လူထုပွဲတော်အဖြစ်ဆင်နွှဲလျှင် မုချအောင်ရမည်။
အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာတို့ဟာ ပြောက်ကျားစစ်ရဲ့နည်းသစ်များဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီနည်းသစ်များကို သခင်ဗဟိန်းက ပြုစုပို့ချပေးခဲ့တယ်။ အရင်ဦးဆုံး စည်းရုံးရေးမှူးများကို သဘောတရားရေးအရးအခြေခံ၍ သင်တန်းများပို့ချခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ဟာ အမြင်အားဖြင့်အင်အားကြီးမားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီကင်းမဲ့သောလက္ခဏာ၊ လူထုဆန့်ကျင်သောလက္ခဏာတို့ကြောင့် ဖက်ဆစ်တို့ကို လူထုက ထောက်ခံမှုမရှိဘူး။ မထောက်ခံရုံမျှမက အုံကြွဆန့်ကျင်မည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်တယ်။ လူထုကို ဖက်ဆစ်စိုးမိုး လာချိန် ကြာညောင်းလာတာနဲ့အမျှ တနေ့တခြား ပြင်းထန်လာရမည်မှာ ရှောင်လွှဲမရသောအချက်ပဲဖြစ် တယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ စည်းရုံးကြမယ်၊ နိုးကြားထကြွကြမယ်ဆိုရင် ဖက်ဆစ်တို့ဟာ လူထုနဲ့ ကင်းကွာပြီး အထီးကျန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လူထုရဲ့ချေမှုန်းခြင်းကို ခံရနိုင်တယ်။ ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့ စိုးမိုး မှုအောက်မှာ လူထုတိုက်ပွဲမျိုးကိုဆင်နွှဲရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူထုတိုက်ပွဲနည်းကိုကျင့်သုံးပါက ချေမှုန်းခံရမည် သာဖြစ်တယ်။ ဖက်ဆစ်လက်အောက်ကနေ လွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းမှာ ပြည်သူလူထုကစည်းရုံးထကြွပြီး လက်နင်ကိုင်ပုန်ကန်သောနည်း၊ ပြောက်ကျားစစ်ဆင်သောနည်းကသာလျှင် တခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ် တယ်။ အထက်ဖော်ပြပါသဘောတရားကို သင်တန်းများမှာအလေးထားပို့ချခဲ့တယ်။
စည်းရုံးရေးမှူးများက အဲဒီ တော်လှန်ရေးသဘောတရားကိုခံယူမိတာနဲ့ ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြလာကြတယ်။ အားတက်လာကြတယ်။ အဲဒီလို ယုံကြည်အားတက်လာတာနဲ့အမျှ ခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်ခေါင်းဆောင်များကို သဘောတရားရေးသင်တန်းများ ဆက်လက်ပို့ချခဲ့တယ်။ တော်လှန်ရေးကာလမှာ တော်လှန်ရေးသင်တန်း တိုင်းဟာ လျှို့ဝှက်ရေးအခြေခံပေါ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒီအခါတုန်းက လျှို့ဝှက်ရေးကျင့်သုံးရန်မှာ ထိပ်တန်းလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များ၊ စစ်ပုလိပ် (ကင်ပေ) များ၊ ဖက်ဆစ်တို့၏လက်ပါးစေ ဗမာဖောက်ပြန်ရေးသမားတို့ဟာ သူတို့အုပ်စိုးမှုကိုအတိုက်အခံပြုမယ့် အင်အားစုများကိုဖော်ထုတ်ဖို့ နေ့မအားညမအား လိုက်လံထောက်လှမ်းလျက်ရှိခဲ့တယ်။ တနေရာရာမှ လျှို့ဝှက်မှုပေါက်ကြားသွားပြီဆိုရင် တနွယ်ငင်တစင်ပါ နှိပ်ကွပ်ခံရတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် လျှို့ဝှက်ထိမ်းသိမ်းမှုဟာ အသက်တမျှအရေးကြီး တယ်။ သခင်ဗဟိန်းက လျှို့ဝှက်ရေးထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံများကိုအခြေခံလျက် စားတမ်း တခုပြုစုခဲ့တယ်။ “လျှို့ဝှက်ရေးကို မည်သို့ကျင့်သုံးမည်နည်း” စာတမ်းဟာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးမှာ အ လွန်အရေးပါတဲ့ လျှို့ဝှက်လက်စွဲတခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။
တောင်ငူခရိုင်တော်လှန်ရေးဋ္ဌာနချုပ်ဟာ သခင်ဗဟိန်းနဲ့ ခွဲခွာမရခဲ့ဘူး။ သခင်ဗဟိန်းရှိတဲ့နေရာဟာ ခရိုင်ဌာန ချုပ်ဖြစ်ပြီး ခရိုင်ဋ္ဌာနချုပ်ဆိုရင် သခင်ဗဟိန်းရှိမှဖြစ်တယ်။ တော်လှန်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်စအချိန်မှာ ဖြူးမြို့ နယ် စစ်တောင်းကမ်းပါးမှာရှိတဲ့ ကမ်းနားဘန်းလောင်းရွာမှာ လယ်ယာဦးကြီးမောင်နှံ ဦးစံဖြေ၊ ဒေါ်သန်းညွန့် ဇနီးမောင်နှံတို့ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့အိမ်ဟာ နှစ်ထပ်တိုက်ခံဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ သားသမီးမရှိကြဘူး။ အဲဒီအိမ်မှာ သခင်ဗဟိန်းတို့လင်မယားဟာ ကိုထွန်းလှိုင်၊ မသန်းမြင့်အမည်နဲ့ လျှို့ဝှက်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ သဘောတရားရေးစာတမ်းများကို အဲဒီအိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်ထပ်မှာ လက်နှိပ်စက်ရိုက်ပြီး စာကူးစက်နဲ့ မူပွားခဲ့ကြ တယ်။ လက်နှိပ်စက်ရိုက်ရင် လက်နှိပ်စက်သံကို ရွာတွင်း ဘေးအိမ်များကကြားနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် လက်နှိပ်စက်ရုက်သံမကြားရအောင် လက်နှိပ်စက်ကို မွေ့ရာပေါ်မှာတင်ရိုက်ရတယ်။ မွေ့ရာပေါ်မှာတင်ရိုက်လို့ အသံအနည်းငယ် တိုးသွားခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းမှာ အိမ်ပေါ်က လက်နှိပ်စက်ရိုက်တာနဲ့ အိမ်အောက်က စကောအတွင်းမှာ ပဲစေ့တွေကို ပုလင်းနဲ့လှိမ့်ပေးရတယ်။ ပဲစေ့ကို ပုလင်းနဲ့လှိမ့်တဲ့အသံနဲ့ လက်နှိပ်စက်သံ ရောသွားပြီးလက်နှိပ်စက်သံ ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီလို လက်နှိပ်စက်ရိုက်နေတုန်းမှာ ပဲကို ပုလင်းနဲ့လှိမ့် ပေးရတဲ့အလုပ်က ချွေးဒီးဒီးကျအောင် ပင်ပန်းလှပါသည်။ အဲဒီတာဝန်ကို ဦးစံဖြေရဲ့ဇနီး မသန်းညွန့်က မမော မပန်း အမြဲတမ်း ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ကျရာတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်လိုက်တဲ့ သာဓကပါပဲ။
တောင်ငူခရိုင်ကို သခင်ဗဟိန်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး သဘောတရားအရ၊ လက်တွေ့အရ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ခေါင်း ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောတရားဟာ လူထုအတွင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့ လာခဲ့တယ်။ တော်လှန်ရေးအင်အားသစ်တရပ် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားလာခဲ့တယ်။ လူငယ်လူရွယ်များ၊ အမျိုးသမီး များအတွင်းမှ ခေါင်းဆောင်များကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းတိုင်းဟာ ပုန်းလျှိုး ကွယ်လျှိုးလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ အချိန်ကိုလု၍ လုပ်ကိုင်ရခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးသင်တန်းကို တနေ့လျှင် ၁၂ နာရီအထိ အချိန်ယူသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ သင်တန်းနေရာကိုလည်း ဖက်ဆစ်သူလျှိုတို့ရဲ့အန္တရာယ်ကြောင့် တနေရာမှာ ၁ဝ ရက် ၁၅ ရက် အလွန်ဆုံးဖွင့်ပြီးတာနဲ့ တနေရာပြီးတနေရာ ရွှေ့ ပြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင်တန်းနေရာအသစ်များကို ကြိုတင်ပြီး အစီအစဉ်တကျ ပြင်ဆင်ထားကြရတယ်။ တနေ့လျှင် ၁၂ နာရီလုံးလုံး နိုင်ငံရေးလေ့လာရခြင်းဟာ မလွယ်ကူလှဘူး၊ ပင်ပန်းလွန်းလှတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်တန်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်း တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ် အဆောက်အအုံအတွင်း မှာ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်မှုကို ပြုလုပ်ကြရတယ်။ သခင်ဗဟိန်းရောက်ရှိခဲ့ပြီး သဘောတရားရေးသင်တန်း အနှံ့အပြား ပေးစွမ်းနိုင်မှုကြောင့် နိုင်ငံရေးသင်တန်းတက်ပြီး ရောဂါဝေဒနာဖိစီးခြင်းကို ခံနေခဲ့ရတယ်။
သခင်ဗဟိန်းဟာ တောင်ငူခရိုင်စစ်ရေးတာဝန်ခံဖြစ်သလို ဇေယျဝတီ၊ ဖြူး၊ ကညွတ်ကွင်းနယ်များရဲ့ တိုက် ခိုက်ရေးတာဝန်ခံလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်တို့ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရာမှာ ထင်ရှားတဲ့တိုက်ပွဲများက တော့ ကွင်းချောင်းဝ တိုက်ပွဲ၊ ရှမ်းကုန်းတိုက်ပွဲ၊ ယင်းတိုက်စိမ့်တိုက်ပွဲ၊ ရေအိုးစင်တိုက်ပွဲ၊ ဆင်ပချပ်တိုက်ပွဲ များပဲ ဖြစ်ကြတယ်။ တောင်ငူပြောက်ကျားတို့၏အောင်ပွဲကို အောက်ပါစာရင်းဇယားအရကြည့်ရင် သိသာ ထင်ရှားပါတယ်။
တိုက်ပွဲကာလ-ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့အထိ။
ရန်သူအကျအဆုံး ၇၁၅၉ ယောက်
ရန်သူဒဏ်ရာရ ၂၇၇၃ ယောက်
သုံ့ပန်း ၅၃၈ ယောက်
ကျဆုံး ၆၇ ယောက်
ဒဏ်ရာရ ၆၅ ယောက်
အမြောက် ၂ လက်နှင့် အမြောက်ဆန်များ
အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ ဂျာမနီလက်နက်မျိုးစုံ ၂၉ဝဝ လက်။
ဝိုင်ယာလက်စက် တစုံ၊ တယ်လီဖုန်းကိရိယာများ၊ မှန်ပြောင်းနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၊ စစ်မြင်းများ၊ ဆင်များ စသည်တို့ကို သိမ်းပိုက်ရှိခဲ့ကြတယ်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ တောင်ငူပြောက်ကျားများရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ အလွန်အရေးပါကြောင်း သမိုင်းက သက်သေခံနေပါတယ်။ အဲဒီလို ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ တောင်ငူပြောက်ကျားတို့ရဲ့အောင်ပွဲအလီလီဆင် နိုင်ခြင်းဟာ.
(၁) အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်း
(၂) လူထု၏ အစွမ်းအစကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လူထုကြီးစည်းရုံးလာမိသည်နှင့်အမျှ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေးကို မိမိတို့ မလုပ်မဖြစ်သောအလုပ်အဖြစ် သဘောပေါက်လာကာ လူထုက ဖက်ဆစ်တို့ကို ကိုယ့်အစွမ်းကိုယ့်အစနဲ့ တော်လှန်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်တယ်။ လူထုတော်လှန်ရေးကြီးတခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လူထုကိုစည်းရုံး၊ လူထုရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်၊ လူထုအောင်ပွဲကိုရယူ အစရှိတဲ့ လူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှား မှု၊ လူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုတို့ကို တောင်ငူခရိုင်မှာ ရယူနိုင်ခဲ့ ခြင်းဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောတရားတွေကို လူထုက အသက်စွန့်လုပ်ကိုင် လာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သခင်ဗဟိန်းရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့်ဆိုရင် လုံးဝမမှားနိုင်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သမိုင်းကလက်ခံနေလို့ပါပဲ။
ရနံ့သစ်၊ ၂၀၁၂ မတ်လ
at 5:00 PM Posted by myo0comments
လယ်ကွက်တွေပေါ် ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေထဲ ရောက်ခဲ့ကြဖူးတယ်
နှစ်ရာပေးရပြီး ဘာမှမထူးတဲ့ အထူးကားတွေထဲမှာလည်း ဆုံခဲ့ဖူးကြ
နှစ်ရာတန် ထီလက်မှတ်တွေကို သုံးလေးရာပေးခဲ့ကြရတယ်
ဒီတစ်ပွဲမှာ မင်း ဘယ်ကလောက်
အဲဒါမျိုးတွေကြားမှာ တို့တစ်တွေလည်း လမ်းတွေလို
လူငယ်တိုင်း မလေးရှားသွား အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ်
မနက်မိုးမလင်းခင် မြို့သစ်ကနေ မြို့ဟောင်းဆီ
ရရာ အလုပ်လုပ်ရ၊ ရရာ ထမင်းလုပ်အပုပ်ခံရ
တွေ့ကရာ လေဘေးထည်လေး ဝယ်
တို့တစ်တွေ မနားတမ်း မမောတမ်း
သြော် . .ခုတော့
ဒေါ်စုကို တို့ထက်လေးစားသူတွေ အသီးသီးပေါ်လာကြ
ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့မှတ်တိုင်လေးမှာ ရပ် ကျောက်ချနေပါရော ။ ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေဒေးနေ့အတွက်ထုတ်ပြန်သော မြို့ပြလိင်လုပ်သားများစာတမ်း အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး
at 8:50 AM Posted by myo0comments
အနှိပ်သည် အလုပ်သမလေးတွေဟာ အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ ရှိနေကြပါတယ်။ နေရေး၊ ထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေးကအစ အနှိပ်သည်အလုပ်သမလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိ အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်တွေက လွှမ်းမိုးမှုရှိနေကြပါတယ်။ အနှိပ်သည်အလုပ်သမတွေဟာ အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်ထံမှ အနိမ့်ဆုံးလစာကိုရကြပါတယ်။ အနည်းဆုံး ကျပ်ငွေနှစ်သောင်းမှသုံးသောင်းထိ လခရတတ်ကြပါတယ်။ ဧည်သည့်နှင့်နှိပ်ချိန်တစ်ချိန်ကို တစ်နာရီ (သို့မဟုတ်) ၄၅ မိနစ် သတ်မှတ်ထားပြီး နှိပ်ချိန်တစ်နာရီချင်းစီအပေါ်မှာ ကော်မရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နှိပ်ချိန်တစ်ချိန်ကို ကျပ်ငွေသုံးထောင်သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး အဲဒီတစ်ချိန်အတွက် အနှိပ်သည်အလုပ်သမလေးက ကော်မရှင်ခ ကျပ်ငွေငါးရာ (သို့မဟုတ်) တစ်ထောင် ရတတ်ပါတယ်။ တစ်လလုံးမှာ လခနှင့်ကော်မရှင်ပေါင်းရင် ကျပ်ငွေခုနစ်သောင်း (သို့မဟုတ်) ရှစ်သောင်း ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဧည့်သည်များတဲ့ အနှိပ်သည်အလုပ်သမအမျိုးသမီးတွေဆိုရင် ကျပ်ငွေတစ်သိန်းကျော်ထိ ရတတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာထူးခြားတာက အနှိပ်သည်အလုပ်သမလေးတွေဟာ အခြေခံလစာကိုရရှိနေတယ်။ အကျိုးခံစားခွင့်အနေနဲ့ ကော်မရှင်ခကိုရနေတယ်။ အနှိပ်ခန်းလုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာနေရတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်လို့ ရှုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနှိပ်ခန်းတွေဟာ မြန်မာပြည်တည်ဆဲဥပဒေ (ဥပမာ-ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(ဃ)အရ တရားမ၀င်ပေမယ့် အဲဒီ တရားမ၀င်တဲ့အနှိပ်ခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်သမလေးတွေကတော့ အလုပ်သမားဥပဒေအမြင်အရဆိုရင် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဖြစ်ပေါ်နေလို့ ဒီကိစ္စကို လုပ်သားရေးရာကဏ္ဍထဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။
အနှိပ်သည်သီးသန့်အလုပ်ကိုလုပ်သူနှင့်­­ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်လာအောင် ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်တာ၊ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းအောင် ပြုမူပြောဆိုတာ၊ ဧည့်သည်က ဆက်ဆံလိုကြောင်းတောင်းဆိုသောအခါ ငြင်းဆန်ရင် ငြင်းဆန်ခွင့်မရှိအောင်ဖိအားပေး စည်းကမ်းချက်ထုတ်တာမျိုး (ဥပမာ-ဧည့်သည်က လူလဲခိုင်းလျှင် ဒါမှမဟုတ် ဧည့်သည်က အချိန်မစေ့ဘဲ ပြန်ထွက်သွားလျှင် လိင်မဆက်ဆံတဲ့အတွက် လစာဖြတ်ခြင်း၊ ဒဏ်ကြေးချမှတ်ခြင်း၊ အနှိပ်ချိန်ခံစားခွင့်ကော်မရှင်ဖြတ်တောက်ခြင်း) တို့ဖြင့် ဖိအားပေးပါတယ်။ ဒါကလည်း အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းမှုတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ အိပ်စက်နားနေချိန်ကို အတိအကျသတ်မှတ်မပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ဘက် ဧည့်သည်လာရင်လည်း အနှိပ်ခန်းရှိလူကုန် ဧည့်သည်ရှေ့ထွက် မတ်တပ်ရပ်ပြရတယ်။ နေ့အချိန်မို့ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ညဥ့်သန်းခေါင်ကျော် ဧည့်သည်လာရင်လည်း လူကုန်ထွက်ရပ်ရပြန်တယ်။ ဧည့်သည်က ရွေးရွေး၊ မရွေးရွေး ထွက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ပြရတယ်။ အိပ်ချိန်ကို ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ ဧည့်သည်ဆက်တိုက်လာနေသရွေ့ တစ်ညလုံးထွက်ထွက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ပြရတဲ့အတွက် အိပ်ချိန် နားချိန်မရှိဘူး ဖြစ်လာတယ်။ ဧည့်သည်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလက်မခံဘဲ၊ ထွက်ပြီး မတ်တပ်မရပ်ဘဲ အိပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း အတင်းအဓမ္မနှိုးပြီးထွက်ရပ်ခိုင်းတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲ စေခိုင်းခံရတဲ့အတွက် အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းမှုမြောက်တယ်။
အနှိပ်ခန်းလိင်လုပ်သားတွေရဲ့ကွန်ဒုံးသုံးစွဲနိုင်မှု ရှိ/မရှိဆိုတဲ့အခြေအနေဟာ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနဲ့လည်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်။ ဖိအားများတဲ့အနှိပ်ခန်းလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေမျိုးမှာ လိင်လုပ်သားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမ်ငယ်မှု မြင့်မားနေတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်း ပတ်သက်နေတယ်။ မြန်မာ့လူနေမှုစရိုက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လိင်မှုလုပ်ငန်းကို ရှက်ဖွယ်လုပ်ငန်းလို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ ဒါကြောင့် အနှိပ်ခန်းလိင်လုပ်သားတွေဟာ သိမ်ငယ်စိတ်မြင့်မားနေကြတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဖောက်သည်ရဲ့အကာအကွယ်မဲ့ဆက်ဆံရေးကို လိုက်လျောမိကြတာဖြစ်တယ်။ ပုဂ္ဂလိကတစ်ကိုယ်တော် လိင်မှုဝန်ဆောင်ပေးသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီ(ဥပမာ- ပန်းဆိုးတန်းကားမှတ်တိုင်၊ ဘူတာရုံဂုံးတံတားအောက်နှင့် တိုက်ခန်းများရှိ ဖုန်းဖြင့် အခေါ်လက်ခံအမျိုးသမီးများ) နှင့် အနှိပ်ခန်းလိင်လုပ်သားများ၏စိတ်ခံစားမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှု ကွာခြားပါတယ်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလလုပ်သူတွေက ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ဖောက်သည်ကိုဆက်ဆံကြပေမယ့် အနှိပ်ခန်းလိင်လုပ်သားတွေကတော့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးအပြင် အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းမှု ဆက်ဆံရေးတွေကြောင့် သိမ်ငယ်စိတ်ပိုမိုမြင့်မားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာပဲ အခြားဖြစ်နိုင်သော လိင်လုပ်သားများလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် တိုက်ခန်းတွေနဲ့ပြည့်တန်ဆာများသီးသန့်ထားရှိတဲ့အိမ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ကို အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ခန္ဓာအငှားလိုက်ရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ကြည်ဖြူဖို့ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရပါတယ်။ ခေါက်ကြေးနဲ့ကော်မရှင် ရတာဆိုပေမယ့် လိင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆက်ဆံရေး မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အဲဒီ ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ အိမ်ရှင်ပြည့်တန်ဆာခေါင်းတွေဟာ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို လိင်ပညာပေးဖို့ အကာအကွယ်သုံးစွဲဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ဖို့ အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်အပါအ၀င် ပြည့်တန်ဆာခေါင်းအိမ်တွေဟာ စားသုံးသူဖောက်သည်တွေကိုသာ ကြိုဆိုလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာပေးရေး၊ ကွန်ဒုံးသုံးစွဲရေး၊ အလုပ်ချိန်ကန့်သတ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုရရှိရေးဆိုတဲ့ လူမှုလွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက် ဆွေးနွေးခွင့်၊ တွေ့ဆုံခွင့် ခွင့်ပြုကြမှာ ဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ရှင်တွေက အဲဒီလောက်သဘောထားကြီး အမြင်ကျယ်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ နည်းလမ်းရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
အနှိပ်ခန်းတွေ၊ ဇိမ်ခန်းတွေရှိတာ အရှိတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းတွေကို မှီခိုအသက်မွေးနေရတဲ့ လိင်လုပ်သားတွေကလည်း အရှိတရားဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေက အလှပြင်ခန်း (Beauty Saloon) လိုင်စင်ထုတ်ပေးဖူးတယ်ဆိုတာလည်း အရှိတရားပါပဲ။ လတ်တလောမှာ ငြင်းဖျက်လို့မရတဲ့ အဖြစ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်ကြောင့်ပါလို့ ယိုးစွပ်နေရုံနဲ့လည်း ဒီပြဿနာကပြေလည်မသွားဘူး။ အစိုးရစနစ်ကို မီးမောင်းထိုးပြန်ရင် တစ်မြို့နယ် ဇိမ်ခန်းတစ်ခု နှစ်ခုလောက်ကို အရေးယူပြမယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုင်စင်ကတော့ ပုံနှိပ်နဲ့ရိုက်ထုတ်သလို ထပ်ထွက်နေမှာပဲ။ အခြားနေရာမှာ နောက်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာတာပဲ အဖတ်တင်မယ်။ ဘာမှမထူးဘူး။ ဥပမာ-လိင်လုပ်သားကို အသိအမှတ်မပြုသေးဘူး။ လိင်လုပ်သားအများအပြားဖြစ်တည်မှုအရှိတရားကလည်း တန့်ရပ်မသွားဘူး။
အစိုးရကြောင့်ပါလို့ ဇွတ်အပြစ်ပုံချလေလေ ကျွန်တော်တို့လို အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက် သူတွေမှာလည်း တာဝန်မကင်းပြန်ဘူး။ ဥပဒေက လိင်လုပ်သားကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့အတွက် အစိုးရကဖမ်းဆီးထောင်ချတာကိုပဲ လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ လူမှုတည်ငြိမ်ရေးပျက်သွားတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့က သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်ကို ရှာမပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရရဲ့စနစ်ကြောင့်ပါလို့ ဇွတ်ထိုးနှက်မိလေလေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိင်လုပ်သားတွေဘ၀ ထမင်းလုပ်နဲ့ဝေးလေလေပဲ။ ဒါလည်း အစွန်းတစ်ပါးပါပဲ။
နောက် အစွန်းတစ်ပါးလည်း ရှိသေးတယ်။ အစိုးရစနစ်ကတောင် လိင်လုပ်သားကို အကာအကွယ်မပေးသေးတာ၊ ဥပဒေကတောင်အသိအမှတ်မပြုတာ ဘယ်လိုတရားဝင်ကူညီနိုင်မှာလဲလို့ စဉ်းစားကြတယ်။ လိင်လုပ်သားအခွင့်အရေးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေ ဘယ်တော့ထွက်လာမယ်မှန်းတော့ မသိဘူး။ ရောဂါကူးစရာရှိတာကတော့ ဥပဒေကို စောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ နာရီမလပ်၊ စက္ကန့်မလပ် ရောဂါကူးနေတော့မှာပဲ။ အစိုးရကပဲ အစစအရာရာဖြေရှင်းဖို့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ အစွန်းတစ်ပါးရယ်၊ အစိုးရကတာဝန်မယူလို့ ငါတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အစွန်းတစ်ပါးရယ်ကို ရှောင်ရပါလိမ့်မယ်။
ကူးစက်ခံရမှကုသတာထက် ကြိုတင်ကာကွယ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်တဲ့နည်းလမ်း ရှိကိုရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ လိင်လုပ်သားနဲ့ ထိတွေ့နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရပါမယ်။ အနှိပ်ခန်း၊ ဇိမ်ခန်း၊ အလုပ်ရှင် ဒါမှမဟုတ် မန်နေဂျာထံမှာ ခွင့်တောင်းကြည့်ပါမယ်။ အခမဲ့ သွေးစစ်ပေးရေးကူညီဖို့ကနေ စတင်မေတ္တာရပ်ခံရပါမယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်အရေးကူညီခွင့်ပေးဖို့ ပန်ကြားရပါမယ်။ လိင်လုပ်သားတွေနဲ့ တကယ်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါ သွေးအခမဲ့စစ်နိုင်ခွင့်ကိစ္စ၊ လိုအပ်ရင်ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ကိစ္စ မိတ်ဆက်ရပါမယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်အရ ကွန်ဒုံးလိုအပ်မယ်ဆိုရင် လှူဖို့လည်းပါကြောင်း၊ ယူလာကြောင်း စကားစပ်ကြည့်ပါမယ်။ သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို အကဲခတ်ကြည့်ပါမယ်။ မျက်လုံးတွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှုမပြဘူးဆိုရင် စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပြီး စော်ကားတာမဟုတ်ဘဲ လိုအပ်ရင်လှူဖို့သာဖြစ်ကြောင်းပါပြောပြီး HIV/AIDS ပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်တွေကို ဝေငှရပါမယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်းလည်း တရင်းတနှီးပြောဆိုဆွေးနွေးဖလှယ်ဖို့ အားပေးစကား ပြောရပါမယ်။
ပိုင်ရှင်ကို၊ မန်နေဂျာကို ခွင့်တောင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင် အနှောင့်အယှက်ပေးတာမဟုတ်ကြောင်း၊ လိုအပ်ရင် အကူအညီတောင်းနိုင်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကို ပေးထားခဲ့ပါမယ်။ တသီးပုဂ္ဂလ ပရဟိတကူညီပေးလိုသူသာဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှမဟုတ်ကြောင်း၊ စိတ်တူရာညီအစ်ကိုများ အတူတူအလုပ်လုပ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း တောင်းပန်ပြောဆိုပါမယ်။ ဒီလိုပြောရတာကလည်း ဒီလိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကို အိတ်ထဲထည့်ထားနိုင်ကြတာ၊ သူမကျေနပ်လို့လက်တို့လိုက်ရင် ကူညီတဲ့လက်တွေ လက်ထိပ်နဲ့တွေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့ အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်လည်းမရနိုင်တော့ အသင်းအဖွဲ့ပုံစံရပ်တည်လှုပ်ရှားတာဟာ သိက္ခာဆည်မယ့်အစိုးရအတွက် ရုံးတင်ဖို့ အကွက်တွေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် ဆိုင်ကိုမှတ်ထားပြီး ဖောက်သည်အဖြစ်ပြန်ဝင်ပါမယ်။ လိင်လုပ်သားတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲမတွေ့နိုင်ပေမယ့် တစ်ဦးချင်းတွေ့နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ လိင်လုပ်သားကိုတွေ့ရဖို့အာရုံစိုက်တာဟာ အကြောင်းရှိပါတယ်။
မြို့နေလိင်လုပ်သားနဲ့ နယ်ကတက်လာတဲ့လိင်လုပ်သားဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ မြို့နေလိင်လုပ်သားတွေ အကာအကွယ်သုံးစွဲရကောင်းမှန်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လည်း ရေရှည်မှာထိတွေ့မှုပူတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက် အကာအကွယ်မသုံးစွဲတတ်ကြပါဘူး။ လူမှုစိတ်ပညာအရ လေ့လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထူးတော့ဘူးလို့ခံစားနေကြတယ်။ ပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားပေးမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ရေ၀ယ်သောက်ရတာနဲ့ အစားအသောက်ဝယ်စားရတာ၊ ဧည့်သည်မရလို့ ဈေးဦးမပေါက်တဲ့အခါ စိတ်ပူစိတ်ဆင်းရဲရတာ၊ ဧည့်သည်ကျေနပ်ဖို့ ခြိမ်းခြောက်ခံထားတာလည်း ရှိတာကြောင့် လိင်လုပ်သားတွေမှာ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကို စိတ်ဓာတ်ရေးရာအားပေးမှု လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုအားပေးနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းကို ရှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်စရာရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြို့ပြနေလိင်လုပ်သားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့လူမှုနောက်ခံဟာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမတွေဖြစ်နေ လို့ပါပဲ။ အများအားဖြင့် စက်မှုဇုံတွေကနေ လာကြတာများပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်း၊ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားရပေမယ့် ၀တ်ကောင်းစားလှကို ၀တ်ထားရပေမယ့် အလွယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံကို သူတို့မမက်ပါဘူး။ သူတို့လုပ်အားနဲ့၊ ချွေးနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ပိုက်ဆံရခဲ့တာဖြစ်လို့ သူတို့ သိပ်အလုပ်လုပ်ချင်နေရှာပါတယ်။ စက်ရုံတွေကပိတ်၊ အလုပ်ရုံတွေက အလုပ်မကောင်း၊ သူတို့က အလုပ်ပြုတ်၊ အလုပ်သစ်လည်း ရှာမရ၊ ဒီလိုနဲ့ ၀မ်းရေးအတွက် လိင်လုပ်သားဖြစ်သွားရတာပါ။ ဒါကြောင့် အလုပ်အကိုင်အကြောင်းသာ စကားစကြည့်ပါ။ သူတို့ ရွှင်ပြလာပါ လိမ့်မယ်။ အလုပ်သိပ်ရချင်ရှာတာ။ သိသာလွန်းပါတယ်။ စက်ရုံအသစ်ဖွင့်ရင်၊ အလုပ်အကိုင်သစ်တွေ့ရင် ဆက်သွယ်မယ်လို့သာ လိပ်စာတောင်းယူလိုက်ပါ။ သူတို့တွေဟာ တကယ့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရဖို့ မခဲယဉ်းနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း နည်းလမ်းရှာပေးရ ပါလိမ့်မယ်။
ကျွမ်းကျင်လိင်လုပ်သားတွေကို ကျွန်တော်တို့ စာရင်းပြုစုထားသင့်ပါတယ်။ ယခင်လုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၊ နေရပ်လိပ်စာတို့နှင့်တကွ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်လို့ လျှို့ဝှက်ထားသင့်ပါတယ်။ သေချာ စာရင်းပြုစုထားရ ပါလိမ့်မယ်။
လိင်ကူးစက်ခံရမှုကာကွယ်ရေး ပညာပေးတာ၊ အကာအကွယ်လှူတာ၊ လက်ကမ်းစာစောင်ဝေတာ၊ ဆေးစစ်ပေးတာ၊ နောက်ဆုံး ဆေးရအောင်ကူညီပေးတာအထိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ လူမှုလုပ်ငန်းအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။ လူမှုလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်ထိ ရောက်မလာသေးပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။
လိင်လုပ်သားရဲ့အလုပ်ချိန်၊ နားချိန်၊ ရွေးချယ်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင်သဘောတူစာချုပ် သဘောကတိထားရှိမှုရရှိအောင်လုပ်မှသာ လူမှုအခွင့်အရေးဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတယ်မည်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ လူ့အခွင့်အရေးကို အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကအသိအမှတ်ပြုမှ ကျင့်သုံးခွင့်ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးအသိအမှတ်ပြုကျင့်သုံးလာအောင် တွန်းအားပေးရတာမျိုး၊ တောင်းဆိုရတာမျိုးတို့ ဖြတ်သန်းရပါမယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုမှကျင့်သုံးခွင့်ရမယ့်လူအခွင့်အရေးကို ဘုရားကု ကုလို့မရပါဘူး။ ဆုတောင်းလို့ မရပါဘူး။ သနားကြင်နာပြလို့ မရဘူး။ လှူတန်းဝေငှလို့ မရပါဘူး။ ပညာပေးရေးလုပ်ရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ သိခြင်းမှာ ဆုံးခန်းတိုင်လို့ မရဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးလုပ်ငန်း၊ ဥပဒေအခွင့်အရေးလုပ်ငန်း၊ တရားမျှတရေးလုပ်ငန်းဆိုတာ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့အစိုးရကို ရင်ဆိုင်ရုန်းကန်ရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်သားအခွင့်အရေးကို အရေးဆို ပြဋ္ဌာန်း၊ ကျင့်သုံး၊ အာဏာသက်ဝင်စေခြင်းဖြင့်သာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဟု ဆန္ဒပြုအပ်ပါကြောင်း။